Kpido: copyblogger | Martech Zone
Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ihe na-adọpụ mmadụ uche na ibe ha rutere. Bọtịnụ, igodo, onyogho, isi okwu, okwu gbara ọkpụrụkpụ… ha niile dọọrọ mmasị onye ọbịa. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ uru mgbe ị na-achọpụta ibe ma jiri nwayọ wepụta ihe ndị ahụ maka onye ọbịa wee soro, ịgbakwunye ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka onye ọbịa ahụ pụọ na oku na-eme ihe ịchọrọ ịpị. ma gbanwee
Fọdụ ọdịnaya kachasị mma ị ga-ahụ na ntanetị na-eme mgbe ị nwere ike ịme usoro mgbagwoju anya ma mee ka ọ dị mfe. Copyblogger emeela nke ahụ na infographic a na ide ederede blog. Akụkụ ọ bụla nke ndụmọdụ ahụ bụ imezigharị ma kpochaa post iji nweta ma debe ndị na-agụ ya. E nwere ụfọdụ igodo tupu & afters, too… Tupu - dee blọọgụ gị na ikpo okwu kachasị nke ọma nke na-atọ ụtọ, na-agba ume ịkekọrịta, ma na-enye
Izu ole na ole gara aga bụ nke obi ọjọọ. Amalitere m ọrụ Wiki iji na-arụ ọrụ m na-arụ, akwụgoro onye na-eto eto na-eto eto ka ọ nyere m aka, agba m arụkwaghịm na onye m na-arụrụ ọrụ ma nabata ọkwa ọhụrụ na mbido mpaghara. Achọghị m ka mụ na onye were m n'ọrụ gbanye akwa mmiri ọ bụla (onye m hụrụ n'anya na-arụ ọrụ yana) yabụ, mụ na ndị ọrụ, ndị isi, na ndị ahịa pụrụ iche akparịtala ụka.